Ugreen၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ | Gadget သတင်း
Ugreen၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများအတွက် အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Rafa Rodriguez Ballesteros | 28/10/2021 18:00 | ပစ္စည်းများ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Actualidad Gadget တွင်ကျွန်ုပ်တို့အနှစ်သက်ဆုံးအရာကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ၊ ကြိုးစားပါ။ ဂက်ဂျက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြီးတော့ ငါတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြမယ်။ သူငယ်​ချင်း​တွေ​တောင်​ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်​မဟုတ်​ဘူး။ Ugreen သူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကို ယုံကြည်ကြသည်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ Ugreen ထုတ်ကုန်လေးတွေအကြောင်း ပြောနေတာပါ။
အထူးသဖြင့်၊ ငါတို့မင်းကိုပြောမယ့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းလေးမျိုးရှိတယ်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလွန်ကွာခြားသော်လည်းထုတ်လုပ်သူ၏လက်မှတ်အပြင်၊ ၎င်းတို့တွင်တူညီသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ အားလုံးပြီးပြီ။ အဘို့ပိသန္ဓေယူ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး ကူညီပေးရန် ဖြစ်နိုင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်စေရန်။
1 မတူညီသောလိုအပ်ချက်များအတွက် Ugreen ထုတ်ကုန်လေးမျိုး
2 Ugreen HiTune X5 နားကြပ်များ
3 Nintendo Switch အတွက် Bluetooth adapter
5 USB C အပေါက်များ
မတူညီသောလိုအပ်ချက်များအတွက် Ugreen ထုတ်ကုန်လေးမျိုး
ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိတယ်။ နားကြပ် TWS ကြိုးမဲ့စက်ပစ္စည်းများ၊ HiTune X5။ တစ် USB-C အဒက်တာ multiport with various possibilities.. An adapter for transmission by ဘလူးတုသ် မှ Nintendo ပြောင်းလဲမည်. နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ တက်ဘလက်အတွက် desktop ရပ်တည်ချက်။
Ugreen HiTune X5 နားကြပ်များ
သား Ugreen မှ "ထိပ်တန်း" နားကြပ်များ ၎င်း၏ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံ၊ ဤအရာကို အတည်ပြုပါ။ အထူးသဖြင့်၊ သူတို့သည် သူတို့၏ရုပ်ရည်သွင်ပြင်အတွက် ထင်ရှားလှသည်။ သူတို့ရဲ့ပုံစံက တခြားမော်ဒယ်တွေနဲ့မတူပါဘူး။. ပြီးတော့ ဒါက လူအများအတွက် သတင်းကောင်းပါပဲ။ နားကြပ်အမျိုးအစားများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပြီး စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပြင်းထန်သောဒီဇိုင်းအမှားများကို "ကွဲပြား" စေရန် ပြုလုပ်ထားသည်။
အ Ugreen X5 ၎င်းတို့သည် မူရင်း သို့မဟုတ် ကွဲပြားသော ဒီဇိုင်း၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရသာရှိသော်လည်း အရောင်များသည် ၎င်းတို့၏ကျေးဇူးကြောင့် ထူးခြားသောအသွင်အပြင်ကို ပြသသည်။ ပုံသဏ္roundာန် rounded နှင့် မီးခိုးရောင် ၎င်း၏ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အမှန်က ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်၍လည်းကောင်း၊ တောက်ပသောအရောင်အဆင်း သူတို့ကို အလွန်ပရီမီယံဖြစ်စေသည်။
အားသွင်းအိတ်ကို ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ပြောင်လက်တောက်ပသော အချောထည်များဖြစ်သည်။ အတူ LED သုံးလုံး သူတို့သည် ငါတို့ကို ပူဇော်သောအားဖြင့်၊ တာဝန်ခံမှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ ဘက်ထရီ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သံလိုက်အခြေခံ နားကြပ်များကို အနီးကပ်ယူရုံဖြင့် ပြီးပြည့်စုံစွာ လိုက်ဖက်ပါသည်။
အ ထိန်းချုပ်မှု physical headphone တွေဖြစ်ပါတယ်။ ထိတွေ့. သီချင်းများကို ရှေ့ သို့မဟုတ် နောက်သို့ ဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့် အသံဖွင့်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ခေတ္တရပ်နားသည် o ကစားသည် သီချင်းများ။ ခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေကြားခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း။နှင့်ပင်ငါတို့အသံလက်ထောက်မြွက်။ အားလုံး keystrokes သို့မဟုတ် "ထိ" ၏ထပ်တလဲလဲမှတဆင့်, ဒါမှမဟုတ်ရှည်လျားသော keystrokes မှတဆင့်။
Ugreen ၏ X5 ကြိုးမဲ့နားကြပ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကမ်းလှမ်းသည်။ အထိ 28 နာရီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ၎င်း၏အားသွင်းအိတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အထိအနှောက်အယှက်ကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၇ နာရီ တည့်တည့်. သင့်ဘက်ထရီအတွက် စိတ်ပူစရာ မလိုလောက်အောင်ကို ရက်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
သင့်နားကြပ်များကို ဤနေရာတွင် ဝယ်ယူပါ။ Ugreen HiTune X5 အမေဇုံအပေါ်။
Nintendo Switch အတွက် Bluetooth adapter
၎င်း၏အမည်သည် ဤဆက်စပ်ပစ္စည်း၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယမ၀င်ပါ။ အစမှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ Ugreen ရဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုက လုပ်ဖို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ၏ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ချဲ့ထွင်ပါ။ အီလက်ထရောနစ် အားကိုးဖို့ဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Nintendo Switch ရှိ ဘလူးတုသ်ချိတ်ဆက်မှု ပိုကောင်းတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်စေတယ်။
၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့် ၎င်း၏ပုံစံသည် ဗီဒီယိုကွန်ဆိုးလ်ကိုယ်တိုင်နှင့် လုံးလုံးလျားလျား လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ မျှော်လင့်ရမည့်အတိုင်း၊ ဤအရာသည် ပြီးပြည့်စုံစွာ ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုအတွက် အတားအဆီးဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။ သံသယမရှိဘဲ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခု ၎င်းသည် စက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာလိမ့်မည်။.
ဒက်ဒီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘလူးတုသ် ၅.၀ Ugreen မှ နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးမဲ့နားကြပ်များကို Nintendo switch ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အကြိုက်ဆုံးများ ၎င်းတို့ကို အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်ပြီး ပျော်ရွှင်လိုက်ပါ။ ကြိုးမဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံ။ နှင့်အတူ 120 mAh ဘက်ထရီ သင်ကစားရန်များစွာရှိလိမ့်မည်။ ခြောက်နာရီအထိဆက်တိုက်.
သင်၏ nintendo တွင် ပလပ်ထိုးပြီးသည်နှင့် သင့်ကြိုးမဲ့နားကြပ်များကို ၎င်း၏ interface နှင့် ချက်ချင်းချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်၊ ချိတ်ဆက်မှုကို အမြဲတမ်း အလိုအလျောက် ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။. ၎င်းတွင်ရှိသည်။ နားကြပ်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက် ချိတ်ဆက်နိုင်မှုဂိမ်းကို မျှဝေသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ 10 မီတာအထိ အကွာအဝေးရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည်အတိုင်း Ugreen ကို အဆိုပြုထားသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့် လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ ဒီကိရိယာလေးကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Switch သည် ချိတ်ဆက်မှုတွင် အမြတ်များသည်။ ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသော အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပိုကောင်းပြီး ပိုမိုပြည့်စုံပါသည်။
သင်၏ adapter ကိုရယူပါ။ ဘလူးတုသ် Nintendo Switch အမေဇုံမှာ
နောက်ထပ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကတော့ စမ်းသုံးကြည့်လို့ရပါပြီ။ Ugreen တက်ဘလက်ရပ်တည်ချက်. စျေးကွက်တွင် သူ့ကိုယ်သူ ထူထောင်ရန် နှေးကွေးနေပြီး ၎င်းသည် တက်ဘလက်များထက် များစွာ နောက်ကျပြီးမှ ရောက်ရှိလာသည်မှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဒီနေရာမှာတော့ အထောက်အပံ့တစ်ခုပါပဲ။ တက်ဘလက် မော်ဒယ်တိုင်းကို လက်တွေ့ကျကျ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ညီညာသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လုံခြုံစွာ ထိန်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ဘလက်များအတွက် ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုရှိသည်။ အသုံးပြုရတာ ပိုအဆင်ပြေစေတယ်။. အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့နှင့် ရေးသားခြင်း သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန် မလိုအပ်သည့်အချိန်တွင် မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာကို စားသုံးရန် တက်ဘလက်ကို အသုံးပြုသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ အလုပ်လုပ်နေစဉ် စားပွဲပေါ်ရှိ ပံ့ပိုးမှုတစ်ခု သို့မဟုတ် ထို YouTube ချက်ပြုတ်နည်းကို ပြုလုပ်ရန် ကြိုးစားရန် မီးဖိုချောင်ကောင်တာတွင် ပံ့ပိုးမှုတစ်ခု။
Ugreen သည် တက်ဘလက်များနှင့် မိုဘိုင်းလ်များအတွက် ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ၎င်း၏ catalog ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ရှိပါသည်။ ပြီးတော့ ဒီတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ စမ်းကြည့်တာ ကံကောင်းတယ်။ ခေါက်သိမ်းထားနိုင်သောကြောင့် သယ်ယူရအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည်။. အသုံးပြုချိန်တိုင်းတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အထောက်အပံ့တစ်ခုရရန်လည်း အဆင်ပြေပါသည်။
ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပလပ်စတစ် ပတ္တာသည် သတ္တုပစ္စည်းများဖြင့် ပြီးသွားသဖြင့်၊ ၎င်းသည် အလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံတစ်ပုံကို ပေးဆောင်သည်။ ၎ခေါက်စနစ်က ရိုးရှင်းပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ထိရောက်မှုရှိပြီး ဥပမာ၊ ထိုင်နေစဉ် သို့မဟုတ် မတ်တပ်ရပ်နေစဉ် သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် အမြင့်နှင့် ယိုင်လဲမှုကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
Amazon တွင် ဝယ်ပါ။ တက်ဘလက် / မိုဘိုင်းပံ့ပိုးမှု အမေဇုံမှာ
USB C အပေါက်များ
ပြီး​တော့ သင်​တို့​ထံ​ကျွန်ုပ်​တို့​တင်ပြ​သော​အ​သုံး​အ​ဆောင်​များ​၏​နောက်​ဆုံး​တစ်​ခု​ဖြစ်​လာ​ပါ​သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်အထူးသဖြင့် MacBook ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်. ဟိ ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်း၊ နှင့် ဆိပ်ကမ်းများ လုံးဝမရှိခြင်း။Apple လက်တော့ပ်များ၏ မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်သည်။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ သူတို့ပဲရှိတယ်။ USB Type-C ချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခုတည်း. အရံပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ဤအမျိုးအစား၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း အနည်းဆုံး USB မှတ်ဉာဏ်တစ်ခု ချိတ်ဆက်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းမပါဘဲ ငါတို့က ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ချိတ်ဆက်လို့ မရဘူးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့် ဤချိတ်ဆက်ကိရိယာအမျိုးအစားသည် အထူးသဖြင့် ဤကိရိယာအမျိုးအစားကို အသုံးပြုသူများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သံသယတစ်ခုမှမရှိဘဲ, ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို "ပုံမှန်" သုံးနိုင်စေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ. Ugreen သည် သင့်ကွန်ပြူတာ၏ ဖြစ်နိုင်ချေများကို မြှောက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသော multiport connector ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ယူဆောင်လာပါသည်။
အထူးသဖြင့်၊ multiport Ugreen ချိတ်ဆက်ကိရိယာနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။ သုံး USB 3.0 portsတစ်ဆိပ်ကမ်း HDMI နှင့်စုံတွဲတစ်တွဲ slot များ ၎င်း၏ဘက်မှာ မန်မိုရီကတ်များကို ဖတ်ပါ။. USB C ပေါက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လွတ်သွားသော်လည်း ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ ဘက်ထရီအား တစ်ချိန်တည်းတွင် အားသွင်းနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ဤနေရာတွင် သင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ 6-in-1 USB C Hub အမေဇုံမှာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » Ugreen၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများအတွက် အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Tronsmart Studio ကြိုးမဲ့စပီကာ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်
တစ်ပတ်တာ၏ အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံအက်ပ်များ